Tansy (sary) — ny fomba fijery, ny fomba hivoatra ary ny mahasoa
Tanzy fananana sy fambolena
Tansy — rhizomatous maharitra, izay mihamaro eny rehetra eny. Hita any Eoropa izy io. Azia, Afrika ary Amerika Avaratra. Any amin’ny firenentsika dia misy karazana 30 amin’ny zavamaniry.
Ao amin’ny trano dia ilaina avokoa ny zava-drehetra
Tansy dia efa fantatra ela momba ny toeram-pitsaboana ary efa nihalehibe tao amin’ny farihy pharmacy. Ny anarana hoe «tansy» amin’ny fiteny sasantsasany amin’ny teny slavika dia midika hoe «mamony» noho ny fofona manokana izay mampiavaka ny ampahany rehetra aminy.
Io fofona io dia nahatonga ny hoe ny tansy dia nampiasaina ho zavamaniry matevina. Any amin’ny firenena maro, dia ampiasaina amin’ny famokarana tsinay mangidy sy kvass, zavamaniry mampinono.
Tansy dia tena ilaina amin’ny fiarovana ny vokatra vokatry ny aspirine, ary amin’ny menaka manitra sy ny zava-manitra — noho ny votoatin’ny solika.
Ao amin’ny zaridaina, ity zavamaniry iray ity dia afaka manamboatra savoka na alim-borona, ary mameno ny toerana malalaka eo amin’ny trano sy ny fefy.
Mitadiava sy fantaro ny tansy
Ao amin’ny firenentsika dia mahazatra ny fisainana mahazatra. Any anaty ala, dia hita any amin’ny rindrin’ny ala, amin’ny gadra, amin’ny làlan-dranomasina, eny amoron’ny renirano sy amin’ny lembalemba. Azonao atao ny mahita azy sy eo akaikin’ny toeram-ponenan’ny olona iray — any amin’ny zaridaina, eny amin’ny kianja, eny eny amin’ny arabe, any anaty ala.
Fambolena sy fikarakarana fisainana
Ny dity dia manaparitaka ny ampahany amin’ny roimemy sy ny masomboly amin’ny lohataona na fararano. Fa mety sy tara-masoandro, ary toerana maina, tany tsy misy lalan-drà, ary tsara indrindra ho azy. Rehefa maniry ao anaty lavaka ianao, dia afaka mampiditra hafanana fosafasina sy potsy.
Taorian’ny fambolena dia mila rano mandriaka ny tansy. Rehefa miorim-paka ny zavamaniry dia tsy afaka manondraka izany ianao. Nipoitra ny tanjony tamin’ny herintaona.
Tansy — tombontsoa sy fananana
Ao amin’ny fanafody ny volokano, fampiasan’ny tansy ny fitsaboana amin’ny fitsaboana. Ny fampidirana voninkazo ho toy ny fanafody ivelany dia ampiasaina amin’ny fanasitranana ny vava mandritra ny dingam-pandrenesana sy tenda ao amin’ny tendany. Amin’ny ankapobeny, ny tansy dia fantatra amin’ny bakteria manohitra ny bakteria, manala baraka, mahasosotra, manohitra ny faniriana, ary ny kolera.
Tansy — fanatsarana olona
Ny dite vita amin’ny loko manify dia manampy amin’ny fanerena tsindry.
Ny tapa-tsinay dia afaka mamoaka kankana.
Ho an’ny tsy fahitan-tory, asio ranom-boaloboka maina eo ambanin’ny ondana.
Miaraka amin’ny hatsembohana amin’ny tongotra dia mamoaka ny fandroana amin’ny fanesorana ny tansy.
Ny ravinkazo sy ny voninkazo dia ampiasaina ho toy ny zava-manitra ho an’ny lasopy sy salady.
Ny fampiterahana, ny famokarana ary ny vovoka amin’ny fahandroana maina dia ampiasaina hiadiana amin’ny bibikely ao amin’ny zaridaina.
Ny fanasana ny lohany amin’ny famarotana ny tansy dia manampy amin’ny henan-doha.
Ny tian-kisarisary mampihetsi-po dia manatsara ny fiankinan-doha, ny fanasitranana ary misy vokany mahavariana, noho izany dia ampiasaina amin’ny olana amin’ny tsinay.
Manampy amin’ny radiculitis ny tsiratsiraka japoka.
Mba ahafahanao mihinana trondro vaovao, dia azonao atao ny manery ny tansy.
Ny teôs avy amin’ny voninkazo tansy dia manampy amin’ny fanalefahana ny tazo amin’ny hatsiaka.
Ny famelana ny voninkazo amin’ny tansy dia afaka manasa ny ratra ary manompa.
NITANDRINA! Ny karazana fitsaboana rehetra miaraka amin’ity zavamaniry ity dia tokony ho tanterahana eo ambany fanaraha-maso ny dokotera mpanatrika, satria ny sokatra sy ny fitsaboana dia mety miteraka fanehoan-kevitra mahatsiravina. Ny zavamaniry dia ratsy sy mifanohitra amin’ny fitsaboana ny zaza sy ny vehivavy bevohoka.
Ny mofomamy ny tansy dia tsara ho an’ny famonoana, azo ampidirina amin’ny bouquets saha.
Amin’ny endrika maina, tansy, mitazona loko mavo mamiratra, ary tsy manova ny endriny, fa ampiasaina amin’ny fanaovana bouquets ririnina sy firavaka voninkazo. Ary satria tsy mamela ela ny fofony mangidy, dia tena ilaina amin’ny famokarana saka.
Читать так же: Льнянка: описание, лечебные свойства травы, применение, фото
Inona no atao hoe tansy? Benefits sy fananana — lahatsary
© Mpanoratra: Natalia STEPANOVA, Profesora Associate, Departments of Biology and Ecology Teaching Methods AL Herzen.
Fanamarihana sy fanehoan-kevitra: 2
Faharoa, ny ririnina sy ny ronono dia azo zaraina amin’ny legioma avy amin’ny bibikely mipoapoaka. 700 g maina na 2 kg ny tansy vaovao (ny ampahany manontolo)
Mandatsaka rano rano 10 aho, manantona andro 2, manasà minitra 30, sivanina, aleo amin’ny rano mangatsiaka 1: 2, ampio 50 g amin’ny savony. Izaho dia manara-maso ny firafitry ny legioma sy ny hazo alohan’ny hanombohan’ny famokarana 3-4 in-droa isan-taona amin’ny andavanandro amin’ny andro 5-6.
Fahatelo, amin’ny lohataona sy lohataona mavomavo marevaka dia mameno tavoahangy manoloana ny bibikely sy ny aretina aho: nametraka azy ireo tamin’ny afo aho ary nanidy ny varavarana rehetra sy ny varavarankely. Andro vitsy taty aoriana dia navoakako ny trano fonenana.